Fifamoivoizana: Ny gaboraraka indray no rariny? | Hevitra MPANOHARIANA |
Fifamoivoizana: Ny gaboraraka indray no rariny?
2016-04-29 @ 08:28 in Andavanandro
Mafampana ny toe-draharaha noho ny fahasorenam-bahoaka mihamipoitra tsikelikely. Mivoaka ihany koa ny nitaizana azy izay mahamenatra, fa tsy fantany intsony hoe mahamenatra anie izany zavatra takiany izany. Toa lasa izy indray no manana ny rariny satria izy no avo vava. Resaka fitateram-bahoaka no lazaiko eto amin'izany.
Akory ny hagagana tamin'ny alatsinainy 25 avrily 2016 raha nisy fiara fitaterana maromaro nitokona tamin'ny ilany atsimo sy andrefan'Antananarivo. Ny andro nitokonana no mitovy fa toa samy manana ny olany, nefa toa iray ihany no fanazavana mipaka eny amin'ny vahoaka. Vao maraina dia tsy nisy hita ny nalehan-dry zalahy. Ny zotra mampitohy an'Ampitatafika amin'Analakely no hitako tsy nisy niasa tamin'io maraina io. Ny fototry ny olana re tamin'ny tsahotsahon'ny olona, izay tsy maintsy inoako hoy ny jeneraly zandary mpifehy ny boriborintanin'Antananarivo izay, dia ny fanerena ny fiara fitateram-bahoaka rehetra avy any andrefana, na avy aty afovoan-tanana hitodi-doha hiverina eo Anosizato Andrefana eo: tsy maintsy mandeha any amin'ny lalana rarivato mizotra mankany amin'ny Sam Run iny avokoa ny fiara fitaterana rehetra fa tsy mahazo tonga dia manaraka ny lalam-pirenena voalohany, ka eo amin'ny tobin-dasantsy eo Anosizato Andrefana ihany izany lalana izany no mivoaka.
Ny fiara rehetra avy any andrefana, na avy any Ampitatafika na avy any Ambatomirahavavy dia lazaina fa tsy maintsy manaraka io lalana io avokoa na dia tsy misy olona hiala sy horaisina mihitsy aza. Ny zandary mihitsy no manakana ny fiara fitateram-bahoaka mitady hidify izay tondro izay, ary araka ny tsaho sy ny resaka ataon'ny olona dia teren'ny ao amin'ny kaominina ireo zandary ireo hampandoa sazy hatramin'ny 90.000 ariary izay fiara mitady tsy hanaiky izay fepetra izay. Eo amin'ny sary dia ilay tsipika volontany io izany lalana tsy maintsy andehanana izany. Ny fiviliana menamena eo ankavia no mankao amin'ilay toera-pialamboly Sam Run, ary ny tondro mena eo ankavanana ambany kosa no lalana mankany Isoavina, hivoaka Tanjombato koa, raha te-hiala fitohanan'ny fiara.
Izay ny amin'iny fa ny fitokonana tany Andoharanofotsy no nampiaiky. Nitaky ny fahazoana miodina an-tenatenan-dalana tsy voatery ho tonga eny amin'ny terminus ireo mpitatitra ireo. Tany ireo saofera ireo no tena nitabataba fa ny tary Ampitatafika tsy hita fotsiny izao ry zalahy sy ny fiara. Notakian-dry zalahy ihany koa ny hanafoanana ny CIR izay tsy azo ifanarahana, hoy ry zalahy. Inona ny dikan'ilay hoe tsy azo ifanarahana? Tsy azo hanaovana risoriso andoavana ekôlazy ve? sa inona? Ary ny tena nahagaga dia nekena ilay izy... Izany hoe manana ny rariny ve ry zalahy? Inona ilay rariny amin'izay fotoana izay? Na dia tany amin'ny toeran-kafa aza ilay lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona izay samy fiara fitateram-bahoaka no nifandona dia vokatry ny gaboraraka nitaizana ireo saofera ireo amin'ny ekôlazy isa-maraina izany, reheefa voaloa ny ekôlazy dia afa-manao izay tiany atao amin'ny vodihazo sy ny bahambahana sy ny karazam-pahadisoana mety ho tsy voatanisanao intsony ry zareo. Dia soratana aloha izay zavamisy izany.
29 avrily 2016